Nde Pound họpụtara Gameweek 33: Premier League na Championship - cheapinternetsecuritysoftware.com
Nde Pound họpụtara Gameweek 33: Premier League na Championship
Anyị na-aga ọzọ. Premier League – na Championship – na-aga n’ihu. Ya mere, Nde Pound Picks. Egwuregwu iri, goolu iri, nwere ike imeri £ 1M. Na-atọ ụtọ.
Ihe onyinye ndị ọzọ? Onyinye ego a kwụrụ ụgwọ nke £ 2000 maka Picker Picker kachasị mma anyị, yana Bet 10 Free Bet maka onye ọ bụla nke na-enweta opekata mpe 3/10.
Kwesịrị ịmatakwu? Pịa ebe a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-eji ihe anyị họpụtara daa. Were ndụmọdụ anyị, leghara ya anya, mee ihe ọ bụla masịrị gị. Ma na-agụ na… na-anyị on!
Obí yiri egwu iwe Leicester na Man City agafebeghị, ma nke a nwere ike ọ gaghị akwụ ọtọ. Mana anyị na-achọ Raheem Sterling ịchọta ụdị ụfọdụ ma mee ka ụmụ nwoke Pep gaa nso.
N’ikwu okwu banyere na ọ bụghị n’elu akara ahụ, Brighton anaghị emere onwe ha ihe ọma – ọghọm ịlaghachi Sheff Utd bụ nsogbu kachasị ọhụrụ ka ha na-ekwu maka nlanarị. Mana Neal Maupay nwere mmasị n’ihe gbasara Leeds.
West derby ụbọchị na nke a nwere ike ịbụ ntu ọzọ na akpati ozu Fulham. Timo Werner nyere Chelsea bọọlụ na ngwụcha izu gara aga ma anyị dị njikere inye ndị German ọzọ pụọ megide ndị na-agba mbọ Cottagers
Swansea na-asụ nsụ mana ebe egwu ga-ekwe nkwa. Derby dị egwu – na ọkwa Championship ha nọ n’ihe egwu. Akụkụ Welsh kwesịrị inwe ọtụtụ maka ndị na-emegide ha, ya na Andre Ayew nwere ike ị nweta uru megide Rams ndị nwute.
Villa nwere ike ịhapụ ijeụkwụ mana Everton ka na-enwe ebumnuche Europe yana isi atọ dị mkpa. Ugbu a dị ka oge zuru oke maka Dominic Calvert-Lewin ịlaghachi na omume ahụ.
Newcastle na Arsenal
Newcastle egosiputala igwe n ​​’izu ndi gara aga iji bulie isi ihe ha choro, ihe n’adighi ama Arsenal. Ihe aghụghọ Allan Saint-Maximin nwere ike ịkpata mbibi, Callum Wilson nwere ike ime ka ụgbụ ahụ pụta.
Lee anya na egwuregwu kachasị egwu n’oge a ma gwa anyị na nke a agaghị adighi ike dịka mmiri mmiri. Onweghi goolu, o nweghi onye isi goolu.
Spurs v Sheff Utd
Ryan Mason obụrede mbụre a 100% Premier League mmeri ndekọ, olee otú ị ga-esi megide nke ahụ?! Son Heung-Min anọghị n’ọsọ egwuregwu na Wembley na ngwụcha izu ikpeazụ. Anyị gụrụ na ọ ga-anọ ebe a.
Ọzọ derby, ọgwụgwọ ọzọ. West Brom so na ihe mgbaru ọsọ ndị a n’oge na-adịbeghị anya, ebe Burnley kụpụrụ Wolves n’oge ikpeazụ. Baggies, Pereira, ota.
Ndien ke akpatre, claret ye blue derby. Enweela nrụgide na Turf Moor na izu ndị na-adịbeghị anya, mana enwere ọtụtụ na Champions League chasers West Ham. Chris Wood ọ nwere ike ịkụda olile anya Hammers?
Premier League ịkụ nzọ
Premier League ịkụ nzọ dị n’oge niile ogologo oge na Grosvenor Sport na nke a bụ nsogbu na Million Pound Picks iji buru akara mbụ na oge ọ bụla na ngwụsị izu a – ọ bụrụ na ị na-eche.
PlayerTeamFirstAnytimeSterlingMan City24 / 531 / 20MaupayBrighton17 / 47 / 5WernerChelsea17 / 429 / 20AyewSwansea24 / 515 / 8Calvert-LewinEverton18 / 559 / 50WilsonNew Newcastle21 / 433 / 20No GoalscorerMan Utd v 2939/29311
* Ọnọdụ ndị akọwapụtara ziri ezi n’oge edere
Tags:Championship Gameweek họpụtara League Nde Pound Premier
Ndụ Live Roulette LiveRoulette Blog
Ọdịnaya 1. Ndepụta Okwu nke Roulette2. Ndụ Roulette FAQ Ntughari …
Mwakpo Megaways nyochaa (RTP: 96.3percent )
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịga njem na mbara …
Mgbe Harry zutere Cornelius… ọzọ! Oge Nyocha
“Hey, onye mmeri.” Okwu mmeghe sitere n’aka onye mgbasa ozi …